I-telefoonka - Wikipedia
iPhone (/ aɪfoʊn / EYE-fone) waa khadad casriga ah oo loo qoondeeyey oo laga iibsanayo Apple Inc. Khadka iPhone ee alaabada isticmaala nidaamyada software-ka ee kumbuyuutarka ee Apple-ga. Jiilka kowaad ee iPhone ayaa la sii daayey 29-kii Juunyo, 2007-dii, iyo qalab cusub oo qalab cusub oo cusub oo la sii daayay oo la sii daayay tan iyo markii la sii daayay. Interface-ka waxaa lagu dhisay agagaarka shaashadda badan ee taabashada, oo ay ku jiraan kumbiyuutar wicitaan ah. IPhone wuxuu leeyahay Wi-Fi wuxuuna isku xiri karaa shabakadaha gacanta. Cunto Iphone ah ayaa laga yaabaa inuu ku duubo fiidiyowga (inkastoo tani aysan ahayn qaabka caadiga ah illaa iPhone 3GS), sawirro qaadasho, muusikada, diro oo la helo email, shabakadda internetka, diraan oo helaan farriimaha qoraalka, raacaan GPS navigation, xusuus qorka, xisaabinta xisaabaadka , oo helikaraan muuqaal ah. Waxqabadka kale, sida ciyaaraha fiidiyowga, shaqada tixraaca, iyo shabakada bulshada, ayaa suuragal ah in ay awood u yeeshaan soo dejinta barnaamijyada moobiilka. Laga bilaabo Janaayo 2017, Apple App Store waxaa ku jira in ka badan 2.2 milyan codsiyada la heli karo ee iPhone ah.
Horumarinta waxa la samayn lahaa iPhone wuxuu bilaabmay 2004, markii Apple uu bilaabay inuu soo ururiyo koox shaqaale ah oo 1,000 shaqaale ah (oo ay ku jirto Jonathan Ive, naqshadeeyaha ka danbeeya iMac iyo iPod)  si ay uga shaqeeyaan muraayadda "Project Purple" Shirkadda Apple Steve Jobs ayaa diiradda saaraysay kiniiniga ugu horreeya ee kiniiniga ah (taas oo Apple ugu dambeyntii dib loo eegayo iPad-ka) telefoonka.  Apple wuxuu abuuray qalabka inta lagu jiro iskaashiga qarsoodiga ah ee lala yeesho Cingular Wireless (taas oo noqotey AT & T Mobility) waqtiga-qiimihiisu korodhka horumarinta US $ 150 milyan soddon bilood.
Sida laga soo xigtay Steve Jobs, ereyga "i" ee "iMac" (oo markaa "iPod", "iPhone" iyo "iPad") waxay u taagan yihiin internet, shakhsi, barbaarin, wargalin, iyo dhiirigelin.  Apple wuxuu diidey "habka qaabeynta guddiga" kaas oo u keenay Motorola ROKR E1, oo ah iskaashiga ugu weynaa ee aan lagu guulaysanin ee leh Motorola. Maqnaanshaha kale, calaamadaha ROKR E1 ayaa xaddidan kaydka oo keliya 100 heeso iTunes ah si looga fogaado in ay ku tartamaan Apple iPod nano. 
iPhone iPhone OS 1.0 Juun 29, 2007 (2007-06-29) iPhone OS 3.1.3 Juun 20, 2010 (2010-06-20) Template:Age in years and months $499/$599*
iPhone 3G iPhone OS 2.0 Luuliyo 11, 2008 (2008-07-11) iOS 4.2.1 Maarso 3, 2011 (2011-03-03) Template:Age in years and months $199/$299*
iPhone 3GS iPhone OS 3.0 Juun 19, 2009 (2009-06-19) iOS 6.1.6 Sebteembar 18, 2013 (2013-09-18) Template:Age in years and months $199/$299*
iPhone 4 iOS 4.0 Juun 21, 2010 (2010-06-21) iOS 7.1.2 Sebteembar 17, 2014 (2014-09-17) Template:Age in years and months $199/$299*
iPhone 4S iOS 5.0 Oktoobar 14, 2011 (2011-10-14) iOS 9.3.5 Sebteembar 12, 2016 (2016-09-12) Template:Age in years and months $199/$299/$399*
iPhone 5 iOS 6.0 Sebteembar 21, 2012 (2012-09-21) iOS 10.3.3 Sebteembar 18, 2017 (2017-09-18) Template:Age in years and months $199/$299/$399*
iPhone 5C iOS 7.0 Sebteembar 20, 2013 (2013-09-20) iOS 10.3.3 Sebteembar 18, 2017 (2017-09-18) Template:Age in years and months $99/$199*
iPhone 5S iOS 7.0 Sebteembar 20, 2013 (2013-09-20) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $199/$299/$399*
iPhone 6 (Plus) iOS 8.0 Sebteembar 19, 2014 (2014-09-19) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $649/$749/$849 ($749/$849/$949)
iPhone 6S (Plus) iOS 9.0 Sebteembar 25, 2015 (2015-09-25) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $649/$749/$849 ($749/$849/$949)
iPhone SE iOS 9.3 Maarso 31, 2016 (2016-03-31) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $399/$499
iPhone 7 (Plus) iOS 10.0 Sebteembar 16, 2016 (2016-09-16) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $649/$749/$849 ($769/$869/$969)
iPhone 8 (Plus) iOS 11.0 Sebteembar 22, 2017 (2017-09-22) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $699/$849 ($799/$949)
iPhone X iOS 11.0.1 Nofeembar 3, 2017 (2017-11-03) latest iOS (current) > Template:Age in years and months $999/$1149
Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 *24-month contract required
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=I-telefoonka&oldid=192886"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Juun 2019, marka ee eheed 09:51.